के गर्लान् महासघंहरुले ? « नेपाली मुटु
« हलिउड अभिनेत्रीको सम्पत्ति नेपालीलाई
माधव नेपाल त ‘गैँडा’ भइसके रे »
के गर्लान् महासघंहरुले ?
Posted by नेपाली मुटु on May 17, 2010
गएको मास नेपाली राजनितीमा एउटा तरङ्ग दौडिएको स्पष्ट देखियो । बिभिन्न कोणबाट अनेक दृष्टिकोणहरु छापामा र जनमानसमा देखिन थाल्यो । यो ध्रुविकरणको सुरुवात हो भनेर अड्कल काट्नेहरु पनि प्रशस्त देखिन थाले । देशमा कुनै अनिष्टको भय मडारिन थाल्यो । सरकार पक्ष र विपक्षमा बाँडिन थालेको स्थितीमा नेपाली राजनितीमा मझधारको नेतृत्व गर्दै देखा प¥यो, उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघं र अरु सघं सस्थाहरु । माओबादीले गरेको अनिश्चितकालिन आमहडतालको विरोध र सहमतीको सरकारका लागि गरिएको भनिएको शान्ति सभाबाट सरकार धेरै खुसी भएको थियो । सरकारले यही खुसीमा सार्वजनिक घोषणा ग¥यो, ‘आमहडताल माओबादीले फिर्ता लिए हामी राजिनामा दिन तयार छौं ।’ उसको यो घोषणाले माओबादीलाई आमहडताल फिर्ता लिन दबाब दियो । जनताका बिरुद्धमा जनता उतारिने अबश्था बढ्न थाल्यो । अन्ततः माओबादीले आमहडताल नैतिक जिम्मेदारी भन्दै स्थगीत ग¥यो र बल सरकारको कोर्टमा रहेका जानकारी दियो ।
यहाँसम्म सबै माओबादीको हार (?) मा सबै खुसी भएको छापामा आउँन थालिसकेको थियो । आफुले दिएको दबाबले मुर्त रुप लिएको मानेर महासघंका पदाधिकारीहरु चमकपुर्ण अनुहारमा पुगे प्रधानमन्त्रि माधवकुमार नेपालकहाँ । तर समयले कोल्टे फेरिसकेको थियो । आमहडताल फिर्ता भइसकेको थियो, छापा र अधिकतम मिडियाहरुमा माओबादीले हारेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको थियो । यस्तो अवश्थामा राजिनामा दिनु पर्ने कारण माधवकुमार नेपालले देखेनन् । यसैले महासघंका पदाधिकारीहरु लगायतलाई ठाडै इन्कार गरिदिए । उनले भने, “माओबादीलाई चन्दा दिने, सेल्टर दिने तपाईहरु अनि सुरक्षाको जिम्मेदारी सरकारले लिनुपर्ने ? यस्ता कुरा गर्दै नगर्नुस् म राजिनामा दिन सक्दिन ।” सहमतीको सरकार बनाएर त्यस्को यश आफुले लिन तयार महासघंहरु माधवकुमारको यो वचनबाट दिक्क मात्र भएनन् । सरकारका विरुद्ध ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएर कर नतिर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर आन्दोलनको अल्टिमेटम सकिदा सम्म पनि सरकार मागहरु सुनुवाई गर्ने पक्षमा देखिएन । अब आन्दोलनको घोषणा गरेका महासघं किमंकर्तव्यविमुढ भएर बसेको छ ।
अब प्रश्नहरु यत्ति धेरै उभिएको छ कि अब हिजोका दिनमा माओबादीलाई सहमतीको बिरुद्धमा देख्नेहरुको आवाज के हुने ? के माओबादीलाई सहयोग हुन्छ भनेर सबै सचेत नागरिकहरुले मौनता साँधेर बस्नुमा कुनै तुक होला र ? आखिर फरक नै के रह्यो र देशका निम्ति, सबिंधानका निम्ति । माधवकुमारहरु कसैलाई नटेरि सिमा बाहिरमात्र हेरेर सुरक्षित महसुस गर्छन र आफ्नो देश जनताका लागि अनुत्तरदायी भएर बस्छन् भने चुप बस्ने हक कसलाई होला र ?
This entry was posted on May 17, 2010 at 9:02 am	and is filed under चुप लाग्न नसक्दा. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “के गर्लान् महासघंहरुले ?”
good good ali fast vayo ni ta hoina?